ဘာလိုလိုနဲ့ ( ၆ ) နှစ်ပြည့်သွားပြီ။ အဆောက်အဦးအနေနဲ့ ပြောရမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော့်ရဲ့ အိမ်ကလေးပေါ့။ ပိုင်ဆိုင်မှုအနေနဲ့ ပြရမယ်ဆိုရင် ဒါဟာ ကျွန်တော်ရဲ့ ဒိုင်ယာရီလေးပါပဲ။ ကျွန်တော့်ရဲ့မိတ်ဆွေ၊ ကျွန်တော့်ရဲ့ သူငယ်ချင်း၊ တစ်ခါတလေ ကျွန်တော့်ပြောသမျှ တိတ်တိတ်လေး လေးနားထောင်ပေးတတ်ပြန်တယ်။ တစ်ခါတလေလည်း ကျွန်တော် သူ့ကို မသိကျိုးကျွန် ပြုနေတတ်ပြန်တယ်။ ဒါပင်မဲ့ သူဟာကျွန်တော်ကို အမြဲနားလည်ပေးခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်နဲ့အတူ အမြဲတမ်းရှိနေပေးခဲ့တယ်။
ကျွန်တော်နဲ့ သူ စတွေ့တာ ၂၀၀၉ ခုနှစ်လောက်က။ သူနဲ့စရင်းနှီးတော့ ကျွန်တော်ပျော်ရွှင်ခဲ့ရတယ်။ ကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တာတွေကို သူက ကူညီပေးခဲ့တယ်။ သူ့ကိုလည်း ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် အမျိုးမျိုးပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့တယ်။ ကျွန်တော့်အပေါ် ဇောဒကတတ်တာမျိုးလည်း မရှိခဲ့ဘူး။ ကျွန်တော်က နေဆို သူနေတယ်။ ကျွန်တော်ကသွားဆို သူသွားတယ်။ ကျွန်တော်က အဆက်အသွယ်မလုပ်ဘဲ နေလည်း သူက ဘာမှမပြောရှာဘူး။ ဒါပင်မဲ့ ဘယ်လိုပဲ မသိချင်ယောင် ဆောင်ဆောင်၊ မဆက်သွယ်ပဲနေနေ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပြုစုပျိုးထောင်ထားတဲ့ သူ့ကို ကျွန်တော် ဘယ်လိုလုပ် မေ့လို့၊ ထားခဲ့လို့ရနိုင်မှာတဲ့လဲ။
တစ်ခါတလေမှာ သူနဲ့အတူ ကျွန်တော့်ရဲ့ဘဝ အမှတ်တရလေးတွေကို ပြန်ပြောဖြစ်ကြတယ်။ သူနဲ့စကားပြောတဲ့အချိန်တွေဆိုရင် ကျွန်တော့်ရဲ့စိတ်ကို ကျေနပ်မှု အမြဲပေးတယ်။ သူနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော်မှာ မိတ်ဆွေဆိုတာ တိုးလာခဲ့တယ်။ အဓိကကတော့ သူ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ကျွန်တော့်ကို မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တယ်။ သူကိုမေ့ပြီး သူ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အဖွဲ့ကျနေလည်း ကျွန်တော့်ကို အပြစ်မဆိုဘူး။
သူနဲ့ခင်မင်ခဲ့တဲ့ ဒီ ( ၆ ) နှစ်အတွင်းမှာ တစ်နှစ်လောက်ရှိမယ်။ ကျွန်တော် သူ့ကိုမခေါ်မပြောပဲနေခဲ့တာ။ ဒါပင်မဲ့ သူကတော့ ကျွန်တော်ပြန်လာတဲ့ အချိန်မှာ ကျွန်တော်အတွက် အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြန်ပါတယ်။ သူနဲ့ကျွန်တော်ကို အမြဲလိုလို တွဲမြင်နေကျဆိုတော့ ကျွန်တော့်ကိုတွေ့ရင်း သူ့ကို မေးမေးနေကြပြန်ပါတယ်။
အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိတော့ ကျွန်တော်တို့ အတူတူရှိနေအုံးမှာပါ။ သူက ကျွန်တော်ကို ထားခဲ့မယ်ဆိုတဲ့ဖြစ်ရပ်ဟာ ဘယ်တော့မှ ဖြစ်မလာနိုင်သလို၊ ကျွန်တော် အသက်ရှင်နေသ၍ သူဟာ ကျွန်တော်နဲ့ အတူရှိနေမဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ တစ်ဦးထဲသော အဖေါ်ပါ။
အခုဆို ကျွန်တော်တို့ ခင်မင်ရင်းနှီးခဲ့ကြတာ ဒီနေ့ဆို ( ၆ ) နှစ်ပြည့်သွားခဲ့ပြီ။ ( ၆ ) နှစ်ကနေ ( ၇ )၊ ( ၇ ) ကနေ (၁၀)နှစ်၊ (၁၀) နှစ်ကနေ လာမဲ့ နှစ်ပေါင်းများစွာ တူတူရှိနေမယ်လို့ ဆန္ဒပြုရင်း..........။
Posted by Ree Noe Mann at 12:00:00 AM
nice post, Thar Nge.
Keep writing whatever you like. :)
အမှန်တကယ်တော့ ဒီပို့စ်က ရီနိုမာန်ဆိုတဲ့ ဘလောဂ့်လေး ခြောက်နှစ်ပြည့်အတွက် ရေးလိုက်တာပါ။
ဘလော့၆နှစ်ပြည့််မှ နှစ်များစွာ စာတွေဆက်ရေးနိုင်ပါစေ။